Sida Istiikarada looga soo diro Telegram WhatsApp-ka | Forum Mobile
Sida loo xado istiikarada Telegramka looguna gudbiyo WhatsApp
Ignacio Sala | 22/10/2021 22:00 | Nidaamyada hawlgalka, telegraam
Dhab ahaantii laga soo bilaabo imaatinka suuqa ee 2014, Telegram wuxuu noqday goobta fariimaha ugu habboon. Kaliya ma ogola dir fariin qoraal iyo cod ah, samee wicitaano muuqaal ah, wadaag faylasha Laakiin intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ku falanqeyno wada sheekeysigayada dhejiska, dhejiska firfircoon iyo GIF waxayna bixisaa taageero multiplatform tan iyo markii la bilaabay.
Dhinaceeda WhatsApp ayaa taas muujiyay ma dareemaysid inaad ka shaqaynayso codsigaga (Mar dambe ayaan sharxi doonaa) waxayna qaadatay waqti dheer in la hirgeliyo taageerada GIF -yada iyo dhejiska. Intaa waxaa dheer, ilaa dhowr bilood ka hor ma aysan bixin taageero iskutallaab ah.
Haddii aad waligaa fursad u heshay inaad tijaabiso Telegram, gaar ahaan marka WhatsApp ayaa burbura ama joojiya shaqada si ku meel gaar ah, waxaa hubaal ah inay soo jiidatay dareenkaaga tirada badan ee istiikarada, kuwa nool iyo kuwa taagan labadaba, laga heli karo arjiga laftiisa iyo dhinac saddexaad labadaba.
Nasiib darro, WhatsApp-ka waxaan ku xaddidi karnaa nafteena kaliya kuwa (aad u xun). istiikarrada noole iyo kuwa taagan in ay ina siinayso.
Xagee lagala soo baxaa oo laga abuuraa WhatsApp Stickers-ka iPhone
Xalka dhibaatadan, waa la maraa ku isticmaal stickers Telegram WhatsApp. Play Store-ka waxa aanu ku haynaa codsiyo aad u badan oo noo ogolaanaya in aanu samayno stickers noo gaar ah. Laakiin intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale u helnaa codsi ku habboon isticmaaleyaasha raba inay ku dhejiyaan dhejiyeyaasha Telegram WhatsApp oo ay ka fogaadaan inay xoq ka abuuraan.
Waxaan ka hadlayaa arjiga Warqadaha, codsi u ah Android kaliya.
1 Waa maxay StickerConv
2 Sida loogu wareejiyo istiikarrada Telegram-ka WahtsApp
3 Sida loogu daro xirmooyinka dhejiska ee WhatsApp
4 Sida loo badbaadiyo istiikarrada aan ku helno WhatsApp
Waa maxay StickerConv
StickersConv waa codsi aan si bilaash ah uga soo dejisan karno Play Store, waa codsi kaas waxaa ku jira xayaysiisyada iyo wax iibsiga gudaha app, Iibsashada kuwaas oo shaqadoodu ay tahay in la baabi'iyo xayeysiiska, xayeysiisyada mararka qaarkood lagu soo bandhigo shaashad buuxda iyo sidoo kale qaybta hoose ee codsiga iyada oo loo marayo banner.
Codsigan waxa uu noo ogolaanayaa in aanu u gudbino istiikarrada aanu WhatsApp-ka ku dhejinay ee Telegram-ka. Si kastaba ha ahaatee, nagama ogola inaan ku dhejino istiikarada Telegram ilaa WhatsApp.
Waxa app-kan runtii sameeyo marin u hel ilaha dhejiska rasmiga ah kuwaas oo laga heli karo codsiga Telegramka. Taasi waa, haddii aan u wareejineyno astaamaha Telegram WhatsApp, uma baahnin inaan rakibno dalabka buluugga ah.
Telegram vs WhatsApp: keebaa fiican?
Haddaynu helin kii aanu raadinaynay. waxaan isticmaali karnaa shaqada filtarrada. Waxaan sidoo kale isticmaali karnaa isku xirka xirmada dhejiska ee aan rabno inaan ku darno oo aan ku dhejino arjiga si aan ugu beddelno stickers WhatsApp.
Codsigan waxaan ku isticmaali karnaa istiikarrada WhatsApp-ka, oo ay ku jiraan dhejisyo firfircoon. Habka wada sheekeysiga ee dhejisyada firfircoon laga bilaabo Telegram ilaa WhatsApp waxay qaadataa waxoogaa ka dheer (marka loo eego dhejiska guurto ah) iyo, mararka qaarkood, dalabka ayaa si lama filaan ah u xirmi kara.
StickerConv - Beddelka Istiikarada ee WA & Telegram
Sida loogu wareejiyo istiikarrada Telegram-ka WahtsApp
Nidaamka loogu talagalay u isticmaal stickers Telegram WhatsApp Codsiga StickersConv waa mid aad u fudud adiga oo fulinaya tillaabooyinka aan ku tusi doono xagga hoose:
Marka aan furno codsiga, xagga hoose ee codsiga, waxaa la soo bandhigayaa magaca WhatsApp iyo calaamadda iyada oo ay la socoto calaamadda. Marka WhatsApp la muujiyo si weyn waxay la macno tahay inaan aadeyno soo deji astaanta codsiga.
Haddii, dhanka kale, aan gujino astaanta Telegram, oo ay bilowdo inay soo baxdo, waxay la macno tahay inaan dooneyno inaan sameyno. Ka soo deji waxyaabaha ku jira Telegram WhatsApp ee maaha mid ka soo horjeeda.
Sida aan rabno inaan sameyno waa ku wareeji istiikarada Telegram ilaa WhatsApp, Waa inaan uga tagnaa sida ka muuqata sawirka kore, taas oo ah sida loo muujiyo isla marka codsiga la furo.
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa guji furaha Import.
Kadibna waa la soo bandhigi doonaa xirmo dhejis ah oo si toos ah looga heli karo websaydhka Telegram, ma aha dhejiska aan ku rakibnay arjiga, sidaa darteed muhiim ma aha in la rakibo oo lagu habeeyo Telegram aaladdayada.
Haddii aan gujino badhanka Filter, waan raadin karnaa hel xirmooyinka dhejiska ah in aan aad u xiisayno in aan ku isticmaali karno WhatsApp-ka.
Marka aan dooranno xirmada dhejiska ee aan rabno inaan ku darno WhatsApp, dhagsii si dhammaan kuwa sameeyay ay u muuqdaan maadaama ay u dhigmaan emoticons.
Haddii ay tahay xirmo astaamo noole ah, waa in aan hubinno in beddelka Xafid animation, waa la hawlgeliyaa, maadaama haddii kale, dhejiska kaliya ayaa la gudbin doonaa iyada oo aan la socon.
Adigoo gujinaya qalinka lagu muujiyay magaca ku dhejiska, waxaan wax ka bedeli karnaa magaca xirmada dhejiska ka hor inta aan loo soo dejin WhatsApp. Shaqadan waxay noo ogolanaysaa in aan kooxaysiyo istiikarada u qaybino kooxo si aan u fududeyno helitaankooda haddii aan rabno in aan ku habeyno mawduuca.
Isla markaas waxaan gujina badhanka Isbedel.
Kadibna cabbirka guud ee xirmada dhejiska iyo, mar labaad, dhammaan stickers ee ka kooban.
Si aad ugu darto WhatsApp-ka, waxaan u dhaadhacnaa xagga hoose ee boggaas oo guji Kudar WhatsApp
Daaqadda xigta, dalabka ayaa na weydiinaya haddii aan rabno inaan ku darto xirmadaas dhejiska ah WhatsApp. Guji ADD in la sii wado.
Marka soo dejinta WhatsApp la fuliyo, waxaan ku laaban doonaa shaashadda ugu weyn ee codsiga iyo se waxa uu tusi doonaa xidhmada dhejiska ah ee aanu soo dejinay.
Si loo hubiyo in soo dejinta lagu guulaystay, waxaan tagnaa WhatsApp, iyo dhagsii astaanta istiikaarka oo ku yaal agagaarka astaanta shucuurta iyo GIF -yada.
Sida loogu daro xirmooyinka dhejiska ee WhatsApp
Dukaanka Play -ka waxaan ku haynaa codsiyo aad u tiro badan oo noo oggolaanaya ku dar xirmo istiikaro cusub WhatsApp, stickers oo aan samayn karno nafteena.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto oo dhan ballaadhi tirada baakadaha dhejiska ee la heli karo, waxaad si toos ah uga samayn kartaa codsiga. Si loogu daro baakado dhejisyo cusub ah WhatsApp waa inaan fulinaa tillaabooyinka aan hoos ku tusayo:
Ugu horreyntii, waxaan u soconnaa wadahadal WhatsApp ah iyo dhagsii sanduuqa qoraalka sidii haddii aan wax qori lahayn.
Marka xigta, dhagsii icon sticker leh weji.
Kadib guji calaamadda + kaas oo marka hore lagu soo bandhigo wax ka hooseeya sanduuqa qoraalka.
Waqtigaas, way soo bandhigi doonaan dhammaan xirmooyinka dhejiska oo aan ku heli karno WhatsApp.
Waxaan ku dari karnaa midka aan ugu jecelnahay adigoo gujinaya ku dar.
Xirmooyinka astaanta oo muujinaya astaanta ciyaarta (saddex xagal siman) waxay tusinaysaa inay yihiin baakado astaamo nool.
Sida loo badbaadiyo istiikarrada aan ku helno WhatsApp
Haddi aan ku helno istiikaro wada hadal WhatsApp ah oo aan rabno in aan haysano, waa in aan laba jeer ku dheji dhejiska oo menu ka soo muuqda, guji Kudar meelaha aad ugu Jeceshahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Sida loo xado istiikarada Telegramka looguna gudbiyo WhatsApp
Sida loo dhejiyo wallpapers dhaqaaqa PC
Acrotray: waa maxay? Ma nabad baa?